Ucingo: +86 13486165199
Izinsiza kusebenza Zokuphakamisa
isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo & indophi
Ratchet Bopha Phansi
Uyazazi izimbangela ezine ezinkulu zokulimala kwebhande lokuphakamisa
Indwayimane elele phansi ijwayelekile kakhulu empilweni yethu yansuku zonke, futhi ukusebenza kahle kuphezulu kakhulu. Zivame ukubonwa kwezokuthutha nokuphakamisa izinto ezisindayo, futhi nazo zidlala indima ebalulekile. Kodwa-ke, amakhasimende amaningi azothola ukuthi indwayimane ephakamisa kufanele ishintshwe ngemuva kwesikhathi sokusetshenziswa. , Ngakho-ke ...
Uyini umgomo wokuphakanyiswa kwamaketanga
Ibhulokhi lebhulokhi lezandla lilungele ukuphakanyiswa kwebanga elifushane kwemishini nezimpahla ezincane. Isisindo sokuphakamisa imvamisa asikho ngaphezu kwe-10T, kanti esikhulu kakhulu singafinyelela ku-20T. Ukuphakama kokuphakamisa imvamisa akukho ngaphezu kwe-6m. Igobolondo langaphandle le-hoist chain lenziwe ngensimbi esezingeni eliphakeme, i-whi ...
Isizathu sokuthi kungani ibhulokhi le-chain lishelele
Ngabe wake wahlangabezana nalesi simo: ngesikhathi senqubo yokusebenzisa i-chain hoist, i-chain hoist izoshelela, empeleni, esinye sezici ezizokwenza ukuthi i-chain hoist slip yi-disk yokuphambana, ngakho-ke siyini isizathu esizodala ukungqubuzana isiliphu sediski? Okulandelayo, ngizokwethula isizathu esithile ...
Imininingwane kanye Nezindlela Zokuqapha Zokusetshenziswa Kwe-Webbing Sling
Ukuphakamisa ibhande lendwayimane kusetshenziswa kabanzi kwezasolwandle, uphethiloli, ezokuthutha nakwezinye izimboni. Yikuphi enesisindo esincane nokuzivumelanisa nezimo okuhle. Lo mkhiqizo uthandwa kakhulu ngabasebenzisi futhi kancane kancane ushintshe izintambo zezintambo zocingo ezicini eziningi. Ukuze kuqinisekiswe impilo ende yesihlilingi, yini ...
Isingeniso sedivayisi yokuphepha ye-ASAKA HHBB kagesi ephakamisa izintambo
I-HHBB kagesi ephakamisa izintambo kagesi iyinsimbi ebiza imali kakhulu esungulwe yinkampani yethu. Ngezansi sizonikeza isingeniso esiningiliziwe sedivayisi yokuphepha yalesi sikhuphuli sikagesi: 1. Ukubhidliza izimoto “Electromagnetic brake” wuhlobo lwamabhuleki ayingqayizivele. Isici sayo ukuthi u ...
Ungabhekana kanjani nezimo eziphuthumayo zokuphakamisa ugesi
Ukuze ubhekane nezingozi zemishini ezikhethekile ezichuma ngokuzumayo, kuhlelwa lezi zinhlelo zezimo eziphuthumayo ezilandelayo: 1.Uma usebenzisa i-mini electric hoist 200 kg bese kuba namandla kagesi ngokuzumayo, abantu kufanele bahlelelwe ukuvikela indawo yesehlakalo, bamise izimpawu zokuvimbela indawo yokusebenza, ne-sen ...
Izindlela zokuhlola ezijwayelekile zeziphakamisi ze-lever
Kunezindlela ezintathu ezivame ukusetshenziswa zokuhlola ze-lever hoist: ukuhlolwa okubukwayo, ukuhlolwa kokuhlolwa, nokuhlolwa kokusebenza kokubhabha. Ngezansi sizochaza lezi zindlela zokuhlola ngokuningiliziwe ngamunye: 1. Ukuhlolwa okubonakalayo 1. Zonke izingxenye zesikhuphukisi se-ratchet kufanele zenziwe kahle, ...
Kungani ukuphakamisa ugesi kubaluleke kangaka?
Imboni yokuphakamisa inokuxhumeka okukhulu nezinsimbi zikagesi. Amaphrojekthi amaningi azosebenzisa i-mini electric hoist 500kg. Ungaba nelukuluku lokuthi kungani ukuvela kwale mishini yokuphakamisa kagesi kungasinikeza usizo olukhulu kangaka? Ngamanye amagama, ithonya elingakanani ukutholakala kwale hoi kagesi ...
Ungayisebenzisa Kanjani I-Ratchet Tie Down
Imichilo yemithwalo yemithwalo ibamba iqhaza elikhulu ekuthuthweni, ekuhanjisweni, ekuhanjisweni nasekugcinweni kwempahla. Ngemuva kokukhiywa, into inzima ukuwa futhi ivikele leyo nto ekulimaleni. Umsebenzi omkhulu ukuqinisa. 1. Izici zesakhiwo I-ratchet tie phansi iyinhlanganisela ye ...
Inzuzo ye-ASAKA Ratchet Bopha Phansi
1. Imichilo yezimpahla ye-ASAKA ephephile futhi ingaqina ingakhiqiza okungenani amakhilogremu ama-2 000 wamandla okudonsa, okusondeza ibhande lokuqhuma impahla eduze kobuso bento ebophayo yezimo ezahlukahlukene, kuyenze iqine futhi iphephe. Ilungele ikakhulukazi ukulungisa izinto ezingajwayelekile. 2. kwenziwa ibhande lezimpahla ...
Izinto ezidinga ukunakwa ekusebenzeni kwe-Electric Hoist Wire Rope
Izinto ezidinga ukunakwa ekusebenzeni kwe-cd1 wire rope electric hoist zingokulandelayo: 1. Izintambo zocingo esondweni kufanele zihlelwe kahle. Uma zigqagqene noma zitsheke, kufanele zimiswe futhi zihlelwe kabusha. Akuvunyelwe nakancane ukudonsa nokunyathela ...
Izinyathelo zokuphepha zokukhetha i-Bottle Jack
Lapho sikhetha i-hydraulic bottle jack, kunezinto eziningi okudingeka uzicabangele, isibonelo: 1, Sidinga ukuqinisekisa umthamo olinganiselwe esiwudingayo, sincoma ukuthi ukhethe lowo isisindo esikaliwe sokuphakamisa esizophakama kunomthwalo nge 20%. 2.Body ukuphakama nohlangothi: Ngokusho t ...
Uyazazi izimbangela ezine ezinkulu zomonakalo ...
Imininingwane nokuqapha kwe-The Us ...
Isingeniso kudivayisi yokuphepha ye-ASAK ...
IZIKHATHI ZOKWAKHA, LIANGZHU STREET, ISIFUNDA SEYUHANG, IHANGZHOU CITY, ISIFUNDAZO SASEZHEJIANG, ECHINA
Sishayele Manje: +86 13486165199